Hevitra MPANOHARIANA | Septambra 2010
Tsy fitokonana fa fahatezerana ilay teto 67ha avaratra
2010-09-17 @ 22:10 in Andavanandro
Na dia tsy fotoana tokony hanoratako mihitsy aza izao noho ny zavatra tokony hokarakaraina dia tsy laitra fa nitendry ny solosaina ihany. Vao tsy ampy herinandro akory aho no nanoratra fa mety ho avy amin'ny fahatezeran'ny olona noho ny resaka zotra fitaterana no hampiongana ny fitondrana misy ankehitriny, dia hita androany teto 67ha avaratra ny sombitsombin'izany fampitandremana efa nosoratako izany. Marihina fa tsy hoe fampitandremana fampitahorana no nataoko fa filazana mialoha izay mety hitranga rehefa avy ny fotoana.
Marihina fa tsy nanatrika mivantana ny zava-misy aho noho ny asa izay notontosaina fa hagagana tanteraka fony nody raha niova lalana avokoa ny fiara rehetra sy ny fiara fitaterana no nahatonga ahy nanontany ny tato an-trano tamin'izay mety ho zava-misy. Toy ny an'ny maro eto amin'ny aterineto no mba hitako raha nijery ny vaovaon'ny tvplus sy matv ny tena, ary izay ihany no novonjena nojerena.
Fitantarana fohifohy araka ny nolazain'ny saofera no somary fintinina : Mbola tsy tafavoaka ny fiara ny vehivavy lehibe iray sy vehivavy mitaiza zaza iray tamin'ny zotra 183 niala teo amin'ny fiantsonana antsoina hoe tanimalalaka (ampitan'ny Biraon'ny hetra 67ha sy ny Madahotel 67ha) no nihazakazahan'ny polisin'ny boriborintany fahafito (Kaomisarià 67ha) nalaina ny taratasy momba ny fiara sy ny fahazoan-dalan'ny mpamily hitondra fiara. Niteny noho ny fihetsik'io polisy naka taratasy io ny mpandeha tao anatin'ny fiara, ka ny mpanampy ny mpamily indray no novandrahan'ilay polisy. Natsipin'io polisy io teo anoloan'ny fanamoriana ny taratasy rehetra no niteny izy hoe hahita ianareo androany. Dia lasa ny fiara, rehefa tafaverina teo amin'ilay fiantsonana indray ilay fiara ora vitsy taoriana dia nihazakazahan'ny polisy roalahy nosintonina avy tao amin'ny fiara nisy azy ilay mpanampy ny mpamily nahatezitra ilay polisy voalaza teo aloha ihany. Tonga dia nodarohan-dry zalahy tsy nananany antra teo ilay tovolahy. Nentiny tao amin'ny kaomisarià avy eo io mpanampy ny mpamily io ka ny manjò azy aloha dia tsy fantatra mihitsy. Hatreto ny fitantarana hita tamin'ny vaovao an-tsary.
Tezitra noho io zava-niseho io ny olona nanatri-maso ka dia raikitra amin'izay ny fitenenana ilay mpamily hiantso ny namany. Ny fiara 183 irery ihany no nilahatra nibahana ny lalana teo amin'ny toerana nisian'ny trangan-javatra. Tokony ho tamin'ny telo ora teo ho eo no nisian'izay tranga izay. Nihamaro dia nihamarony olona ary tapaka tanteraka tsy azo nalehan'ny fiara intsony ny "Arabe anankiroa" izay manomboka hatreo amin'ny minisiteran'ny asa mankany Ambodin'isotry ka hatreny anoloan'ny Ny Havana. Na dia natahotra ny fiarany saiky hanala ny zotrany aza ny saoferan'ny zotra 183, dia ny olona vory maro dia maro kosa no tsy nanaiky izany. Nanahy ny amin'ny fiara ireo saofera ireo nefa niteny ny olona hoe tsy hisy hikitika izany ny fiaranareo. Mariho hatreto fa ny olona anarivony tsy laitran'ny Emmoreg natosika na nokitikitihina tamin'ny andro mazava no naneho ny hatezerany, ny fiara "nanao fitokonana" kosa tsy tafahetsika noho ny tsy faneken'ireo olona teo ny hanalana ireo fiara ireo.
Na dia tezitra aza ireo olona teny dia horakoraka ihany, fibahanana ny lalana tamin'ny vato trottoir, no tena nataon'izy ireo fa tsy nisy nitora-bato mihitsy ireo mpitam-basy ireo. Ny miaramila no nanapoaka basy sy baomba mandatsa-dranomaso, izay tonga hatreny an-tokotaninay mihitsy ny fofony ka nahalatsaka ny ranomasoko, izaho efa nody alina tsy naharaka ny "action" rehetra fa efa voasavan'ny mpitam-basy ny lalana rehefa tonga teny aho. Nojereko mihitsy manko ny arabe rehetra sao misy potipoti-bato na toy izany fa tsy nahita mihitsy aho. Ny vato sisindalana nabahana ny arabe irery ihany no hitako nitandahatra tamin'ny lalana, sy ny kodiarana nodorana. Milaza izany fa tsy nisy fiomanana velively ity fanehoam-pahatezerana nasehon'ny olona manoloana ny fihoaram-pahefana nataon'ny polisy ity.
Efa nomarihiko mazava tsara taminareo fa izaho dia anisan'ny vavolombelona amin'ny fihoaram-pahefana ataon'ireo polisy ireo fa aman-tsegondra ihany no azon'ny fiara ijanonana amin'ny fiatoana natokana ho azy, misy aza ireo fantatra fa rehefa mijanona eo amin'ny fiatoana fotsiny ianao dia efa nandika lalàna ianao ka alaina avy hatrany ny taratasinao. Talohaloha raha nimenomenona noho ny ataony ny mpandeha dia mamono sofina fotsiny ireo polisy mpanotra ireo. Teto kosa nihoatra ny fihetsika nataon'ny polisy ary dia tsy nampoiziny ny valiny nataon'ny olona. Nijoro fotsiny ireo olona ireo fa tsy nanao na inona na inona, feno avokoa ny sisin-dalana rehetra hatreny Antohomadinika nandalovako fa tsy mbola tonga saina tsara aho tamin'io, tamin'ny hamaroan'ny olona.
Soa ihany fa nahita raha ny mpizaika nody avy tany Ivato tany ka tsy maintsy hifanontany amin'izay mety ho nitranga ary hanan-kotantaraina rehefa mody any amin'ny misy azy, na dia mpanohana ny fitondrana mijoro ankehitriny aza ry zareo (mariho fa tsy miteny hoe fitondrana tetezamita na fahefana avon'ny tetezamita mihitsy aho satria tsy tetezamita intsony ny ao an-dohan'izay mitondra. Nanoratra ihany aho satria efa resy tanteraka tsy te-hitantara intsony ny mpamaham-bolongana eto Madagasikara ka lasa mangetaheta ianareo rehetra any ivelan'i Madagasiakara any. Marihina fa tamin'ny fito ora hariva vao vakin'ny mpitam-basy (tsy manonona hoe mpitandro ny filaminana aho) ny lalana nobahan'ny olona.
Jentilisa, 18 septambra 2010 amin'ny 00:00